I-37 Ton Container side lifter izothunyelwa eKenya
Kungokokuqala ukuthi ikhasimende lethu laseKenya lithenge ophakamisa ohlangothini lwamakhonteyina angama-37ton kwa-CCMIE, futhi ikhasimende lisayethemba kakhulu i-CCMIE. Imenenja yethu yokuthengisa yenza kuphela ikhotheshini eningiliziwe ukuze ikhasimende likhethe kuyo, futhi ngokuya ngezidingo zekhasimende, sincoma okulandelayo ...
ungakusebenzisa kanjani ukuphakamisa isiqukathi esingu-20ft
Namuhla senza ulwazi lwande, ingxenye ye-Side Loader Trailer Side Loader Truck iqukethe izingxenye eziningana 1. Ukudonsa ilitha elisehlangothini le-trailer, singakhetha ukunikwa amandla yi (PTO), noma singakhetha ukusebenzisa i ezimele injini yokunikeza amandla. Lezi zindlela ezimbili zamandla zihlinzeka ...
Muva nje, iShanghai Port Machinery Heavy Industry yethule isabalalisi esinamabhokisi amabili esingakwazi ukuzivumelanisa nochungechunge oluphelele lwenkontileka yokufinyelela ngesisekelo se-standard-container eyodwa yokufinyelela isitaki. Isitaki esinamabhokisi amabili sinokuhleleka okuhleleke kwesakhiwo kanye nokwakheka kwesakhiwo. Ingakwazi...
Ukuqhamuka kukaZero! Ama-International Standards for Lifting Machinery abuyekezwe yiZhenhua Heavy Industry akhishwa ngokusemthethweni
NgoJuni 17, i-standard ejwayelekile yamazwe omhlaba i-ISO 7752-5: 2021 “Lifting Machinery-Control Devices-Arrangement and Characteristics-Part 5: Bridge and Gantry Cranes” kanye ne-standard ejwayelekile yamazwe omhlaba i-ISO 9374- 5: 2021 “Crane — Information to Provided by Abahlinzeki nabathengi-Ingxenye 5: Ibhuloho i ...
Imikhiqizo yochungechunge lwe-ZPMC Super Reach stacker
Muva nje, imikhiqizo yochungechunge lwe-ZPMC Super Reachstacker isusiwe kulayini womhlangano ngokulandelana, kufakwa amandla amasha emakethe yomshini wokusakaza. Isitaki esikhulu sokufinyelela singahlangabezana nezidingo zokudlulisa ukusebenza kahle kwamatheminali namagceke ahlukahlukene, futhi sihlakaniphile futhi siphephile. T ...
Iminyaka emi-5, isuka ku-95 iye ku-104! I-ZPMC ifinyelela eStacker
Finyelela isitaki, esaziwa nangokuthi i-container front crane, umshini weselula osetshenziselwa kabanzi ukulayisha nokuthulula iziqukathi emagcekeni, emachwebeni nakulayini wezitimela. Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwezidingo zesikhathi sokuvikelwa kwemvelo, ukuthuthuka okusheshayo kwezokuthutha kwezitimela ...
I-ZPMC Abu Dhabi Terminal Equipment Comprehensive Maintenance Project
Ngo-Okthoba 27, inkampani ephethwe yiZPMC Middle East yawina isicelo sokulungiswa ngokuphelele kwemishini yokugcina ye-COSCO SHIPPING e-Abu Dhabi, kufaka phakathi ama-cray ayi-11, ama-cranes angama-32 ezenzakalelayo, amasistimu wokulawula ukufinyelela, amaloli angaphakathi angama-66, ama-stackers, kanye ne-stackers Futhi enye iselula ...
Imikhiqizo yomshini wokugeleza we-ZPMC ingena okokuqala emakethe yaseCambodia
2020-07-23 NgoJulayi 21, ama-stackers ama-container angenalutho athunyelwa ngokushelela eSihanoukville, eCambodia, kumaka okokuqala lapho imikhiqizo yomshini wokugeleza weZhenhua Heavy ingena emakethe yaseCambodian. ISihanoukville Port, ebizwa ngeWest Port, itholakala ogwini oluseningizimu-ntshonalanga yeCa ...
Bamba ukuphakama kwemakethe yesitaki sokufinyelela
020-06-08 “Ama-stackers eZhenhua adumile embonini eminyakeni yamuva. Sibheke phambili kulezi zindawo ezintathu zokufinyelela eziqhakaza eWeihai Port. ” Ngo-Ephreli 9, iShandong Port Group Weihai Port yafaka "abalingani abasha". Ngaphansi kwemigqa yamabhuloho amakhulu amakhulu, ezintathu ...
I-ZPMC ifinyelela isitaki ingene ngempumelelo emakethe yaseTurkey
2017-06-19 NgoJuni 15, i-CCMIE neMedithera Company zisayine inkontileka yokuphakelwa kwezitaki ezifinyelelekayo. Umtshali-zimali weNkampani iMedithera yiTurkey Potunus Company, enokuqashiswa okunothile nokusebenza kokuthengisa nokuhlangenwe nakho kwesondlo emkhakheni wemishini yemishini ethekwini encane njenge ...
I-ZPMC ngokuzimela yathuthukisa uhlobo olusha lwesitaki sokufinyelela futhi yazuza udumo kumakhasimende
Muva nje, kuthunyelwe ama-stackers amabili eZhenhua Heavy Industry athunyelwa kubasebenzisi baseMongolia. Phambilini, lapho abasebenzisi baseMongolia beya enkampanini yokukhiqiza yenkampani ukuyohlolwa esizeni, babegcwele ukuncoma nokuqashelwa okuphezulu kwekhwalithi yenkampani efinyelelekayo. Zhenhua Heavy Ind ...
Ukuthunyelwa kwe-CCMIE side loader ukuthekelisa e-Oceania
Muva nje, umkhiqizo we-crane ohlangothini owenziwe yinkampani ye-ccmie uthunyelwe ngempumelelo endaweni yomsebenzi yomsebenzisi ePapua New Guinea e-Oceania. Umkhiqizo ohlangothini wendwayimane inkampani i-CCMIE ithuthukiswe ngoSepthemba 2013 ngesisekelo sokujula kokugaya nokumuncwa kobuchwepheshe obuthuthukile bohlangothi ...